बीमा र बैंक खाताको अर्थहीन अभियान | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण बीमा र बैंक खाताको अर्थहीन अभियान
जनतामा सरकारप्रति तीव्र निराशा देखा पर्दै गएपछि सरकारका मन्त्रीहरूले नै यसलाई देशीविदेशी समृद्धि विरोधीहरूको चलखेल भएको भन्ने गरेका छन् । प्रायः हरेक आलोचनाको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिँदै केही शान्तिको अनुभूति गर्ने गरेका छन् । तर, एउटा सत्य के हो भने सरकार जनअपेक्षा अनुसार चल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले हरेक कुराको जवाफ फर्काउँदै बोल्नु, सरकारका प्रवक्ताले पत्रकारमाथि आक्रोश पोख्नु, अर्थमन्त्रीले आपूmभन्दा पहिलेका अर्थ मन्त्रीहरूको कमजोरी देखाउनु, श्रममन्त्रीले श्रमशक्ति व्यवस्थापनभन्दा श्रम सम्झौतामा रमाउनुले यो सत्य उजागर हुन्छ । पछिल्लो समय सरकारले सस्तो लोकप्रियतामा ध्यान दिएर हेर्दा बबाल लाग्ने तर भोग्दा जन्जाल आइलाग्ने खालका कार्यक्रम घोषणा गर्दै हिँडेको छ । चल्तीको परम्परालाई निरन्तरा दिँदै यो वर्षको पहिलो दिन नै समृद्धिको टेप रेकर्ड बजाउँदै ‘ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना र खोलौ बैंक खाता आभियान’ आरम्भ गरेको छ । तर, सरकारका यी दुवै अभियान काम नलाग्ने अभियान हुन् ।
स्वास्थ्य बीमा अहिले संरचनागत समायोजन र संस्थागत सुदृढीकरणको अभावमा चल्न नसकेको लोकप्रिय र अपरिहार्य कार्यक्रम हो । डा. गुणराज लोहनी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यकारी निर्देशकबाट अलग भएसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अभिभावकविहीन बनेको हो । बीमा माफिया र दलालहरूबाट जोगाएर स्वास्थ्य बीमालाई संस्थागत गर्ने पहिलो श्रेय उनै लोहनीलाई जान्छ । तर, स्वास्थ्य बीमाको अहिलेको काम गर्ने शैलीबाट उनी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । लोहनी मात्रै होइन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उदघाटन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीहरू पनि खुशी छैनन् । स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेका खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान अवस्था देखेर आक्रोश नै पोखे । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री नै गम्भीर देखिँदैनन् । तर, लोकप्रियताका लागि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याएका छन् ।
स्वास्थ्य अर्थशास्त्री प्राडा शिवराज अधिकारी त यही मोडलमा जबर्जस्ती स्वास्थ्य बीमा लागू गरे स्वास्थ्य बीमा सफल नहुनेमा ढुक्क देखिन्छन् । उनको विचारमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वायत्त नभएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको इमानदार बुहारी जस्तो हुने हो भने स्वास्थ्य बीमाको घरवार हुने वाला छैन । अहिलेको टड्कारो आवश्यकता अन्तरनिकाय र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको हो । तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अहिलेको समूहले अर्थमन्त्रीलाई सीधा भेट्न डराएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोग मागिरहेको छ । यो क्षमताले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउने छैन ।
त्यस्तै, गगन थापा यसलाई स्वास्थ्य बीमा नै भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । डा. भोला रिजाल भने डा. उपेन्द्र देवकोटाको सपना सम्झँदै कार्यक्रमप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् भने आफूले भने अनुसार नभएकोमा डा. भगवान कोइराला पनि खुशी देखिँदैनन् । यतिका चरम असन्तुष्टि बीच पनि समस्याको निराकरण नगरी थप कार्यक्रम गर्दा सञ्चालन खर्च बढेको छ । बीमामा एकीकृत नीतिको खाँचो छ । यस सम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरा कुहिरोको काग बनेको छ भने यस्तो अस्तव्यस्त वातावरणमा बीमा कार्यक्रम थप गर्नुले केही अर्थ राख्ला त ?
बैंक खाता अभियान पनि यस्तै देखिन्छ । वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच, र वित्तीय साक्षरताका लागि पहिलो खुड्किलो बैंक खाता हो भन्ने तर्क गलत हो । अध्ययनहरूका अनुसार संसारका हरेक बैंकका ८० प्रतिशत खाता निष्क्रिय अर्थात् डोरमेन्ट भएर बस्छन् । बैंकले नाफा कमाउने २० प्रतिशत ग्राहकबाट मात्र हो । त्यसैले अहिले ग्राहक व्यवस्थापनको महत्त्व बढेको पाइन्छ र बैंकहरूले सञ्चालन गर्ने अधिकांश तालीम यसमै केन्द्रित रहन्छन् । अहिले न्यूनतम मौज्दातको गलत व्याख्या गरिएको छ । विगतमा पनि निःशुल्क बैंक खाता खोली दिने बैंकको त कमी थिएन नै हुँदाहुँदा एउटा खाता खोल्दा खातावालालाई १ सय रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड किनिदिने बैंकहरू पनि देखिए । तर पनि जनता बैंकमा गएनन् किनभने बैंक जनतामा गएनन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरू जनतामा त गए तर ‘फाइनान्सियल रिइन्जिनीयरिङ’ विना राष्ट्र बैंकको परिपत्रमात्र बोकेर गए । अभैm पनि बैंकका वित्तीय विवरणहरू हेर्दा धितोमा आधारित कर्जाको वर्चस्व छ । परियोजनामा आधारित धितोको अनुपात त शून्यसरह छ नै सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने परिपाटीमा बैंक जान सकेका छैनन् । अनि कसरी जान्छन् जनता बैंकमा ?
खाता खोल्दा लाग्ने १ सय रुपैयाँ बैंकले नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रहेर तिरिदिने भन्ने छ । तर, यस्तो व्यवस्थालाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नभई संस्थागत सामाजिक मूल्य (सीएसभी) भनिन्छ, जसको व्याख्या हार्भड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक माइकल ई. पोर्टरले सन् २०११ मा गरेका थिए । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर २१ ले संस्थागत सामाजिक मूल्यका बारेमा केही पनि नबोलेका बेला स्वस्फूर्त रूपमा जानी नजानी यस्तो उन्नत अवधारणा आउनु प्रशंसनीय भए पनि यो सँगै विशिष्टीकरणको अवधारणा जोड्न कन्जुस्याइँ गरिएको छ । सेवामा विशिष्टीकृतता प्राप्त गर्ने भन्दा पनि हरेक बैंक हरेक व्यवसाय गरेर खाताहरूको संख्या बढाउने ध्याउन्नमा छन् । जस्तै : स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकले मुसहर बस्तीमा गएर खाता खोलाएर केही समृद्धि हात लाग्ने छैन । मुसहरको आर्थिक उत्थानका लागि त्यहीको ढुंगामाटो बुझेको बैंक चाहिन्छ । त्यस्तै, वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली अन्तर्गत भारतमा पैसा पठाउँदा नेपाल एसबीआई बैंक नै उपर्युक्त हो किनभने जुन तुलनात्मक लाभ एसबीआई बैंकलाई उपलब्ध छ, त्यो अरू बैंकसँग छैन । यसको अर्थ के भने आप्mनो सेवा विशिष्टीकरण (मार्केट निश) जे मा छ त्यसको लाभग्राहीको छनोट गरेर यो उन्नत अवधारण लागू गर्न सकिए मात्र गुणस्तरीय, मर्यादित, सम्मानित र आनन्ददायी बैंकिङ सेवा भोग्न गर्न सकिन्छ । एकताका ३ करोड नेपालीले प्रौढशिक्षा पढेको तथ्यांक बाहिरिएको थियो । सबैका लागि सबै भनेर खाता खोल्ने हो भने ठीक यस्तै अर्को तथ्यांक बाहिर आउनेछ ।
बीमा र बैंक खाताको यो अभियान समृद्धिसँग जोडिएर हेरिएको छ । तर, यी सेवामूलक गतिविधि हुन् । असली समृद्धि प्राप्त गर्न त उत्पादनमा जोड दिएर बेरोजगार युवालाई सम्मानित श्रममा व्यवस्थापन गरी उनीहरूको ज्यालाको कारोबार बैंक मार्पmत गराउनुपर्छ र सो पूँजीको परिचालन राष्ट्रिय पुनरुत्पादनमा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
लेखक बीमा सम्बन्धी अध्येता हुन् ।